Laacib hore oo is barbardhig ku sameeyay sababta Juve 7 jeer looga qaaday Milan-na ay 7 jeer u qaadday CL + Sawirro – Gool FM
Laacib hore oo is barbardhig ku sameeyay sababta Juve 7 jeer looga qaaday Milan-na ay 7 jeer u qaadday CL + Sawirro
(Brescia) 04 Juunyo 2017 – Laacibkii hore ee reer Talyaani iyo kooxo fara badan ee Paolo Ziliani, oo haatan ciyaaraha falanqeeya ayaa fikirkiisa ka dhiibtey dhibka Juventus ka haysta KHY.
Kooxda Juventus ayaa waxaa xalay ku durdurisay kooxda Real Madrid oo 4-1 kaga qaadday koob ay ka qatanaayeen muddo 21 sanadood ah, taasoo imanaysa 2 sano uun kaddib markii isla koobkan ay ka qaadday kooxda BARCA.
Wuxuu Twitter kusoo qoray is barbardhig uu ku sameeyay guulaha Champions League ee AC Milan iyo guuldarrooyinka Juve isagoo yiri: “Haddii ay Milan hanatay 7 Champions league oo Juve 7 laga qaaday, waxaa ugu wacan Milan had iyo goor kubad ayay dheeshaa, balse Juve marna ma dheesho, (waana aragtaa).” isagoo ula jeeda kulamada final-ka CL.
Se il #Milan ha vinto 7 #Champions e la #Juve ne ha perse 7, è perché il Milan ha sempre voluto giocare a pallone, la Juve mai (e si vede) pic.twitter.com/BG6LTruGjF
— Paolo Ziliani (@ZZiliani) 4 juni 2017
Liverpool oo qarka u saaran inay qaadato Muxamed Saalax
maxamed agaafe says:
asc maxamed agaafe jooga burco waa runti ac kubad bay ciyaarta lkn juve waxay ubod boda italy acmilan yuurub bay wax ka tahay